District-wide Instruction Updates for Second Semester | Battle Creek Public Schools
We’re looking forward to welcoming all students back remotely on January 4. But we also want to make sure to communicate our plans forareturn to in-person learning in January with plenty of advance notice.
Grades Pre-K–5 will return to in-person learning five days per week on January 18, 2021.
Grades 6–12 will return to in-person learning usingahybrid scheduling model on January 25, 2021.
All families will have the option to opt their students into the self-paced Virtual Academy, if they do not wish to return to in-person schooling.
As always, BCPS is working under direct guidance from the Michigan Department of Health and Human Services and the Calhoun County Department of Public Health. We will only proceed with returning to in-person instruction if it has been determined it is safe to do so. Changes in local virus spread and data could impact our ability to return to in-person learning, and we will keep you notified if any changes occur.
For more information about the health and safety measures that have been implemented in all elementary, middle and high school buildings, click here.
Bus Cards, Schedules & Transportation Updates
Building-specific details about transportation, bus routes, and pickup/dropoff times and procedures will be shared by the week of January 11, when students will also receive their bus cards for the second semester in the mail.
Virtual Academy Signup Deadline
Sign up for virtual academy here
Grade 6–12 Return to In-Person
If it is safe to do so on Monday, January 25, 2021, all middle school and high school students will return to class based onahybrid model. Under the hybrid model, students will attend school in person two days per week and engage in remote learning three days per week. One cohort of students will attend in person on Mondays and Tuesdays and the other cohort will attend in person on Thursdays and Fridays. All students will attend remotely on Wednesdays. Cohort assignments will be mailed home and posted to Skyward by January 5.
On remote learning days, students will utilizeablend of pre-recorded and live Google Classroom sessions, small group sessions, breakout groups with classmates, virtual lessons, online assignments and more.
We know that you are likely to have many questions aboutareturn to in-person learning for middle and high school students. We are hostingadistrict-wide information session on January7and school-specific information sessions on January 13 to ensure you have all of the information you need about what school will look like inahybrid model. Please RSVP on Facebook to receive reminder notifications for the info session you would like to attend. If you are unable to attendalive info session, recordings will be available on our Facebook page as well.
BCPS Grades 6–12 Instructional Plan Info Session
RSVP for 6-12 Info Session here
Battle Creek STEM Innovation Center Instructional Plan Info Session
RSVP for BC STEM Info Session here
Northwestern Middle School Instructional Plan Info Session
RSVP for NWMS Info Session here
Springfield Middle School Instructional Plan Info Session
RSVP for SMS Info Session here
Battle Creek Central High School Instructional Plan Info Session
RSVP for BCCHS info session here
Return to In-person Learning for PK–5
If Calhoun County Public Health Department guidance permits, elementary school students not enrolled in Virtual Academy will return to face-to-face instruction on Monday, January 18, 2021. Students will attend school in person, five daysaweek, with the same safety measures and precautions that were in place this fall.
Virtual Academy Option for All Grades
All students have the option to sign up for an all-virtual, self-paced school option called the BCPS Virtual Academy.
Virtual Academy provides online lessons, weekly check-ins and support from BCPS teachers, but please note that the program is largely self-paced and is different from remote schooling in which students remain with their class groupings and classroom teachers.
Virtual Academy will be best suited for students who are able to thrive in eitheraself-guided oraparent- or guardian-supported learning environment, with less frequent teacher interaction.
If you’d like to sign your student up for Virtual Academy, please fill out and submit this form by Sunday, January 17.
Actualización de la enseñanza en todo el distrito para el segundo semestre
Al acercarse las vacaciones de invierno, queremos comunicar nuestros planes para volverala enseñanza presencial en enero con mucha antelación.
Los grados Pre-K-5 volverán al aprendizaje en persona cinco díasala semana el 18 de enero de 2021.
Los grados 6-12 volverán al aprendizaje en persona usando un modelo de programación híbrido el 25 de enero de 2021.
Todas las familias tendrán la opción de elegir que sus estudiantes tomen clasesasu propio ritmo en la Academia Virtual si no desean volverala enseñanza en persona.
Como siempre, BCPS está trabajando bajo la guía directa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y el Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun. Sólo procederemosavolverala instrucción en persona si se ha determinado que es seguro hacerlo. Los cambios en la propagación local del virus y los datos podrían afectar nuestra capacidad de volverala instrucción en persona, y le mantendremos informado si se produce algún cambio.
Para más información sobre las medidas de salud y seguridad que han sido implementadas en todos los edificios de las escuelas primarias, medias y secundarias, haga clic aquí.
Fechas clave y plazos importantes
Tarjetas de autobús, horarios y actualizaciones de transporte
Planificando detalles específicos sobre el transporte, las rutas de los autobuses y los horarios y procedimientos de recogida y entrega serán compartidos en la semana del 11 de enero, cuando los estudiantes también recibirán por correo sus tarjetas de autobús para el segundo semestre.
Fecha límite para inscribirse en la Academia Virtual
Grado 6-12 Regresoaen persona:
Si es seguro hacerlo el lunes 25 de enero de 2021, todos los estudiantes de secundaria y preparatoria volveránaclase basados en un modelo híbrido. Bajo el modelo híbrido, los estudiantes asistiránala escuela en persona dos díasala semana y participarán en el aprendizajeadistancia tres díasala semana. Un grupo de estudiantes asistirá en persona los lunes y martes y el otro grupo asistirá en persona los jueves y viernes. Todos los estudiantes asistiránadistancia los miércoles. Las asignaciones de los grupos serán enviadas por correoacasa y enviadasaSkyward durante la primera semana de enero.
En los días de aprendizajeadistancia, los estudiantes utilizarán una combinación de sesiones de clases pregrabadas y otrasatravés de live Google Classroom, sesiones de grupos pequeños, grupos de discusión con compañeros de clase, lecciones virtuales, tareas en línea y más.
Sabemos que es probable que tengan muchas preguntas sobre el regreso al aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria y preparatoria. Sostendremos una sesión informativa en todo el distrito el7de enero y sesiones informativas específicas para cada escuela el 13 de enero para asegurarnos de que tenga toda la información que necesita sobre cómo será la escuela en un modelo híbrido. Por favor, confirme su asistencia en Facebook para recibir notificaciones recordatorias de la sesión informativaala que le gustaría asistir. Si no puede asistirauna sesión informativa en vivo, las grabaciones también estarán disponibles en nuestra página de Facebook.
Sesión informativa sobre el plan de instrucción de BCPS para los grados 6-12
Sesión informativa sobre el plan de instrucción del Centro de Innovación STEM de Battle Creek
Sesión informativa sobre el plan de instrucción de la Escuela Secundaria Northwestern
Sesión informativa sobre el plan de instrucción de la Escuela Secundaria de Springfield
Sesión informativa sobre el plan de instrucción de la Escuela Preparatoria Battle Creek Central
VolveraAprendizaje en persona para PK-5
Si la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun lo permite, los estudiantes de primaria que no estén inscritos en la Academia Virtual volveránala instrucción presencial el lunes 18 de enero de 2021. Los estudiantes asistiránala escuela en persona, cinco díasala semana, con las mismas medidas de seguridad y precauciones que se tomaron este otoño.
Opción de Academia Virtual para todos los grados
Todos los estudiantes tienen la opción de inscribirse en una opción donde todo es virtual, escuelaasu ritmo llamada Academia Virtual BCPS.
La Academia Virtual proporciona lecciones en línea, registros semanales y apoyo de los profesores de BCPS, pero tenga en cuenta que el programa es en gran medida al propio ritmo del estudiante y es diferente de la escolarizaciónadistancia en la que los estudiantes permanecen con sus grupos de clase y profesores de aula.
La Academia Virtual será más adecuada para los estudiantes que puedan prosperar ya sea en un entorno de aprendizaje auto guiado o apoyado por los padres o tutores, con una interacción menos frecuente con el profesor.
Si desea inscribirasu estudiante en la Academia Virtual, por favor llene y envíe este formulario antes del domingo 17 de enero.
နောက်ဆုံးရ ခရိုင်တစ်ခုလုံး၏ ဒုတိယအပတ် ပညာသင်နှစ်၏နှစ်ဝက် စာသင်ကာလညွှန်ကြားချက်များ။
ဆောင်းရာသီ(Winter) ကျောင်းပိတ်ချိန်နီးလာသည်နှင့် ဇန္နဝါရီလအတွင်း၌ လူကိုယ်တိုင်ပုံမှန်ကျောင်းပြန်တက် ခြင်း အစီအစဉ်များကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားလိုပါသည်။
သူငယ်တန်း မှ ၅တန်း ကျောင်းသားများသည် လူကိုယ်တိုင်ပုံမှန်ကျောင်းပြန်တက်ခြင်းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းတက်သောအခါ ရက်သတ္တပတ်တွင် ၅ ရက် တက်ရ မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၆-၁၂ တန်းကျောင်းသားများသည် လူကိုယ်တိုင်သင်ကြားမှု နှင့် အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုနှစ်ခုတွဲထားသော ပုံစံ ဖြင့် ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါသည်။
မိသားစုများအနေဖြင့် လူကိုယ်တိုင်ပုံမှန်ကျောင်းပြန်တက်ခြင်းတွင် မပါဝင်လိုသေးပါက၊ အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားခြင်း (Virtual Academy) တွင်တက်နိုင်ပါသည်။
BCPS သည် မီချီဂန်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား၀န်ဆောင်မှုဌာနနှင့် Calhoun County ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနတို့၏ တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုအရ အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုံခြုံမှုရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ ပုံမှန် လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သင်ကြားခြင်းသို့ ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဒေသတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ခြင်း နှင့် ဒေတာများ ပြောင်းလဲခြင်းသည် လူကိုယ်တိုင်ကျောင်းသို့သင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ နိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများရှိပါကသင့်အား ပြန်လည်အသိပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းများအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသောနေ့ရက်များ & အရေးကြီးသော ပြီးစီးရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်(Important Deadlines)
ဘတ်စ် အစီအစဉ်များ၊ အချိန်ဇယား & သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဇန္နဝါရီလ ၁၁- ၁၅၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။
စာသင်ကျောင်းတိုင်း၏ အသေးစိတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ၊ ကျောင်းဘတ်စ် လမ်းကြောင်း၊ ကြို/ပို့အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊စသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက် တွင် ကျောင်းသားများသည် ဘတ်စ်ကားအစီအစဉ်များကို ဒုတိယအပတ် ပညာသင်နှစ်၏ နှစ်ဝက်စာကာ လအတွက်လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းပညာသင်ကြားခြင်း (Virtual Academy) တွင်တက်ရောက်ရန်လျှောက်မည်ဆိုပါက နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသော
နေ့ရက် (Signup Deadline)
တနင်္ဂနွေ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။
၆-၁၂ တန်း လူကိုယ်တိုင်စာသင်ကျောင်းသို့ ပြန်လည်သင်ကြားခြင်း (Grade 6–12 Return to In-Person:)
အကယ်၍ လုံခြုံမှုရှိပြီဆိုပါက၊ အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်းသားများသည် တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရိလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်း နှင့် လူကိုယ်တိုင် နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းစပ်သင်ကြားခြင်း (hybrid) ပုံစံ ဖြင့် သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ (hybrid) ပုံစံဟု ဆိုလိုသည်မှာ ကျောင်းသားများသည် ရက်သတ္တပတ်တွင် နှစ်ရက် သည် စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျန် သုံးရက်မှာမူ အွန်လိုင်းမှတဆင့် သင်ကြားသွားမှာဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုသည် တနင်္လာနေ့နှင့်အင်္ဂါနေ့များတွင် လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်အုပ်စု မှာ ကြာသပတေး နှင့် သောကြာနေ့တို့တွင်တက်ရောက် ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကျောင်းသားအားလုံး သည် အွန်လိုင်းတွင် တက်ရောက်သင်ကြားရပါမည်။ အုပ်စုငယ်ခွဲထားသော အဖွဲ့ နှင့်ပတ်သက်၍ ဇန္နဝါရီလ ပထမအပတ်တွင် စာတိုက်မှ မိမိတို့နေရပ်လိပ်စာသို့ ပို့ပေးပါမည်။ Skyward တွင်လည်း တင်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါ သည်။
အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားသည့်ရက်အတွက် ကျောင်းသားများသည် သင်ခန်းစာများကို အသံသွင်းရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယို နှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို Google Classroom တွင်ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အုပ်စုငယ်ဖြင့် သင်ကြားချိန်ကာလ၊ သီးသန့် အတန်းဖော်များနှင့် တွေ့ဆုံရသည့်ကာလ၊ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ၊ အွန်လိုင်းအိမ်စာ များ စသည့် များစွာသောအစီအစဉ်များ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက် လူကိုယ်တိုင်ကျောင်းပြန်တက်ခြင်း အစီအစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများစွာရှိနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင် ခရိုင်တစ်ခုလုံး ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် စာသင်ကျောင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ သီးသန့်သတင်းအချက်အလက် များကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကြေညာပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသည်။ hybrid ပုံစံ သင်ကြားခြင်း ဆိုတာဘာလဲ ဆိုသည့် သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလည်း ပြောကြပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ သင်တက်ရောက်လိုသည့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အတွက် သတိပေးချက်များရယူဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိ RSVP သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ရယူပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါက၊ Facebook စာမျက်နှာတွင် အသံသွင်းရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယို ရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ နေ့ရက်များကို မှတ်ထားပါ။ (Save the Dates:)
ကြာသပတေး၊ ဇန္နဝါရီလ ရ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
ညနေ ၆း၀၀ နာရီ။
BCPS ၆-၁၂ တန်းကျောင်းသားများ၏ သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
ဤနေရာတွင် RSVP ပို့နိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
ညနေ ၅း၃၀ နာရီ။
Battle Creek STEM Innovation Center ၏သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက် အလက်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
Northwestern အလယ်တန်းကျောင်း၏ ၏သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
Springfield အလယ်တန်းကျောင်း၏ ၏သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
ညနေ ၆း ၃၀ နာရီ။
Battle Creek Central အထက်တန်းကျောင်း ၏ သင်ကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက် အလက်များ ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
မူကြို - ၅ တန်း ကျောင်းသားများ လူကိုယ်တိုင်ဖြင့် ပြန်လည်တက်ရောက်ခြင်း (Return to In-person Learning for PK–5)
အကယ်၍ Calhoun County ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၏ လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုချက်အရ၊ Virtual အကယ်ဒမီတွင် စာရင်း မသွင်းထားသော မူလတန်းကျောင်းသားများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လူကိုယ်တိုင် သင်ကြားမှုဖြင့် ပြန်လည်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် ရက်သတ္တပတ်တွင် ငါးရက် လူကိုယ်တိုင် ကျောင်းသို့တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည် ယခု Fall ရာသီအတွင်း ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းဖြစ်သော အွန်လိုင်းပညာရေး(Virtual Academy Option for All Grades)
BCPS Virtual Academy ဟုခေါ်သော အွန်လိုင်းမှသင်ကြားခြင်းတွင် လျှောက်လွှာတင်ရန် ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ Virtual Academy သည်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများ၊ အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများနှင့် BCPS ဆရာများ၏ ပံ့ပိုးမှုများကိုပေးသည်၊ သို့သော် ပရိုဂရမ်သည် မိမိကိုယ်ကို အားပြုရသောသင်ကြားနည်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားအွန်လိုင်းသင်ကြား ခြင်း နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း သူတို့၏အတန်းအုပ်စုများနှင့် စာသင်ခန်းဆရာများနှင့် အတူရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
Virtual အကယ်ဒမီသည်ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ တို့၏ ပံ့ပိုးထားသည့် သင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်နိုင်သည့် ကျောင်းသားများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Virtual Academy တွင်လျှောက်လွှာတင်လိုပါက၊ တနွင်္ဂနွေနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ၍ ဤနေရာတွင် ဖြည့်စွပ်ပေးပါ။